Saudi Arabia: Wasiirro la Casilay iyo Amiirro Xabsiyada loo Dhaadhiciyay.
Sunday November 05, 2017 - 16:43:39 in Wararka by Super Admin
Hoggaanka Aala Sacuud ayaa shaqada Ka Eryay wasiirro iyo saraakiil Ciidan iyadoona Xabsiyada loola dhaadhiyay Amiirro iyo ganacsato Caan ah.
Khilaafka u dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Aala Sacuud ayaa cirka iskusii shareeray tan iyo markii awoodda wadanka loo dhiibay Max’med Bil Salmaan oo ah dhaxal sugaha koowaad ee boqortooyada.
Amar kasoo baxay Boqorka Daaquudka Aala Sacuud ayaa lagu eryay wasiirro, saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin tobanaan sano lasoo shaqeynayay boqortooyada.
Wasiirkii dhaqaalaha iyo wasiirkii ilaalada Qaranka ayaa shaqada la eryay halka xabsiyada lagu guray ganacsato caan ka ahaa sacuudiga.
Mutcab Bin Cabdullaahi oo ahaa wasiirkii ilaalada wadanka ayaa lagu bedelay Khaalid Bin Cayaaf, sidoo kale seefta xilka qaadista ayaa ku dhacday taliyihii ciidanka badda Sacuudiga iyo waasiirkii maaliyadda iyo qorsheynta Ninka lagu magacaabo caadil Alfaqiih.
Telefeshinka afka xukuumadda ku hadla ayaa sheegay in ladhisay guddi ladagaallama musuq maasuqa iyo wax isdaba marinta waxaana hoggaamiye looga dhigay Max’med Bin Salmaan oo ah Ninka bedeli doona boqor Salmaan.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in xabsiyada loo taxaabay 11 kamid ah amiirrada Aala Sacuud iyo tobaneeyo Siyaasi oo horay wasiirro usoo noqday iyo sidoo kale Afar wasiir oo hadda xilal haayay kuwaas oo ladhigay xabsiyo qarsoodi ah.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka xabsiyada ladhigay uu kamid yahay maalqabeenka caanka ah ee lagu magacaabo Waliid Bin Dalaal kaasi oo looga shakiyay in uu waday olole ka dhan ah Max’med Bin Salmaan.
Baraha bulshadu ku kulanto ayay dadka ku dhaqan dhulka Xarameynka ku faafiyeen warar sheegayay in xaalad adag ay ka dhax taagantahay madaxda Aala Sacuud, waxaa socda ayaa laleeyahay loolan maxalli ah oo madaxda maamulka u dhaxeeya.
Tan iyo Markii Donald Trump uu booqday Sacuudiga bilo ka hor ayuu isbedel aan horay loo arag ku yimid daaquutka aala sacuud kuwaas oo qaaday tallaabooyin ay saliibiyiinta ku raalli gelinayaan sida iyadoo dhaqan geliyay calmaaniyadda islamarkaana mamnuucay in madaarista iyo jamaacadaha lagu daraaseeyo duruusta Jihaadka ka hadlaysa.
Nin lagu magacaabo Mujtahid oo soo gudbiya xogaha qarsoon ee maamulka Ala Sacuud ayaa barta Twitter-ka ku faafiyay macluumaad sheegaya in Tallaabadan ay gogol xaar u tahay in si rasmi ah Max'med Bin Salmaan uu xukunka ugala wareego aabihii oo hadda ka sheeganaya waayeelnimo iyo xanuunno.
Ragga shaqada laga eryay iyo kuwa xabsiyada ladhigay ayaa saameyn siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ku leh gudaha dhulka Xarameynka ah ee Sacuudiga loo yaqaan.
Cabdi ileey oo isagoo dulleysan Ku dhawaaqay in uu iscasilay iyo Xasuuq Ka Dhacay Jigjiga.
Afhayeen iscasilay iyo Maareeyihii Duulista Hawada Oo Shaqada laga Eryay.
Caalim u dhashey Turkistaanta Bari Oo ku dhintay Xabsiyada dowladda Shuuciyadda Shiinaha.